सीतादेवीका छोराले टिकट पाएपछि कांग्रेसका दुई पक्षबीच सिराहमा खुकुरी हानाहान – YesKathmandu.com
सीतादेवीका छोराले टिकट पाएपछि कांग्रेसका दुई पक्षबीच सिराहमा खुकुरी हानाहान
सिराह । नेपाली कांग्रेसका दुई खेमाबीच टिकट वितरणलाई लिएर सिराहमा खुकुरी हानाहान भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच खुकुरी हानाहान भएको हो । कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरालाई मेयर पदमा टिकट दिएपछि कुटकुट भएको हो । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा डा. सुभाषचन्द्र यादवले टिकट पाएका थिए । असन्तुष्ट बनेका उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी कार्यालयमा हंगामा गरेपछि खुकुरी हानाहान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
झडपमा परी दुवै पक्षका १० जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति संजय यादव, बुधन यादव, देबनाथ सहनी, राजेश्वर यादव, रामबाबु यादव, अरुण यादव, जगदिश यादव रहेका छन् । कोषाध्यक्ष सीतादेवीका छोरालाई टिकट दिइएपछि उपेन्द्र पक्षले पार्टी कार्यालय घेराउ गरेको थियो । यसक्रममा दुवै पक्षबीच खुकुरी हानाहान भएको हो ।
प्रचण्डले लगाएका आरोप खण्डन गर्न ओली मधेस झर्दै
डा. गोविन्द केसी सातौ पटक आजदेखि फेरी अनसन बस्दै
प्रधानमन्त्री प्रजातन्त्र दिवसको दिन भारत भ्रमण गर्ने
एसिड हान्ने जीवनकी बहिनीले भनिन् ‘मेरो दाईले सजाय पाओस् तर जातिय विभेदको शिकार भएका हामीले न्याय पाउँ’
दष्टिविहीन छात्रा बलात्कार गर्ने शिक्षकलाई १० बर्ष कैद
‘ नेताहरुको फोटो हेरेर हामीलाई थुक्ने दिन आँउदैछ ’
प्रजातान्त्रिक छिमेकी मुलुकहरुमा आतंकवाद ठूलो चुनौती – प्रधानमन्त्री
कांग्रेसलाई साथ दिँदै राप्रपा नेपाल पनि उभियो लोकमानको बचाउमा
इस्तानबुलको नाइट क्लवमा आतंकबादी हमला, ४५ जनाको मृत्यु ४० घाइते